लाख माथि घुस लिने किन पक्राउ पर्दैनन् ? मुन्द्रेको प्रश्न » Nepal Europe News
Home > मनोरंजन > लाख माथि घुस लिने किन पक्राउ पर्दैनन् ? मुन्द्रेको प्रश्न
२५ असार, काठमाडौं । सामाजिक संजालमा कलाकारहरुले देशको अवस्थाबारे विभिन्न खालका भनाई सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । देशमा देखिएको विकृती, विसंगतीमा कलाकारले आफ्नो भनाई राख्ने गतिलो ठाउँ भएको छ, सामाजिक संजाल ।
जीतुले लेखेका छन्-‘एक लाख घुस लिदा लिदै पक्राउ । पचाँसहजार लिदा लिदै पक्राउ । के घुस यत्तीमात्रै होत हाम्रो देशमा ? यदि यत्ती मात्रै हो भने त संसारकै कम भ्रष्टाचार हुने देशमा पथ्र्यो होला हाम्रो देश ।’
उनले लाखलाई समातेर करोडौवालाई सर्तक हुने संकेत त होइन भनेर आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । उनले लाख भन्दा माथि घुस लिनेहरु किन पक्राउ पर्दैनन् भनेर प्रश्न गरेका छन् ? उनले सायद चेकमा कारोबार भएर हो कि भनेर प्रश्न पनि सोझाएका छन् ?
कोइरालाको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, भेटघाटमा कडाई
साझा सहमतिबाट मात्र चुनाव सम्भव; प्रधानमन्त्री